Thwebula BBC News 3.7.1.9 – Vessoft
Thwebula BBC News
BBC News – isofthiwe ukubuka izindaba zakamuva kanye izenzakalo emhlabeni. Isofthiwe inikeza uhlu olubanzi izingxenye izindaba, kuhlanganise ezemidlalo, ibhizinisi, ubuchwepheshe, impilo, ukuzijabulisa njll BBC News ikuvumela ukuthumela izindaba zakho siqu futhi isiqophi itolitji izintatheli kushicilelwa. Isofthiwe kunikeza nokwenza eseduze kakhulu yezindaba langempela ngokusho esikuthandayo. BBC News nezihloko eziningi futhi ulwazi mayelana nemicimbi kuyo yonke imikhakha ngokuphila anemisila ezifanele photo zemibukiso bazivumelanisa isihenqo idivayisi.
Izindaba othakazelisayo ezivela emhlabeni wonke by izintatheli
Uhlu ezinkulu izingxenye izindaba
Ukuba khona kwezinto ezilalelwayo nezibukelwayo indaba
Ukwenza okuthandwa nguwe of the feeds izindaba
Amazwana on BBC News:
BBC News Ahlobene software:
English, Français, Español, Deutsch... AIMP 2.00.268